Daawo Sawirada :-Soomaali wacdaro ka Dhigtay Bandhig Hiddo iyo Dhaqan ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Barnaamijkaan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa lagu soo bandhigay cayaaro hiddo iyo dhaqan ah oo ay ka qeyb qaadanayeen jaaliyado kala duwan oo ka kala socday wadamo ku yaala qaarada afrika iyo kuwa kale oo ku wada nool magaalada Cape Town.
Wadamada ka qeyb qaadanaya bandhiggan ayaa goobta ku soo bandhigay cayaaro hiddo iyo dhaqan ah,cunooyinka u gaar ka ah,alaabaha ay qaaska u leeyihiin,habka dhar xereshada,cilaan saarka iyo cayaaro kala duwan kuwaa oo wadan walba uu doonayay in kan kale uu kaga guuleysto,islamarkaana uu muujinaya hab dhaqan iyo hidaha u gaar ah.
Soomaalidda ka qeyb qaadaneysay bandhigan ayaa waxaa ay muujiyeen in si weyn ay uga dhax muuqaan karaan bulshooyinka kale oo ay la noolyihiin,waxaana ay soo bandhigeen cayaaro aad loo jecleystay iyo waliba agab kala duwan oo gaar u ah hiddaha iyo dhaqanka soomaalidda.
Wax yaabaha ugu cajiibka badan ayaa waxaa ka mid ahaa in saf loo soo galay habka cilaan saarka oo dumarka soomaalidu uga duwanaayeen wadamada kale ,waxaana dadka inta badan ay safaf dheer u soo galeen goob ay gabar soomaali ah cilaan saar ku sameyneysay,waxaana la arkay rag iyo dumar ajnabi ah oo hanaanka naqshadeynta cilaanka gabadhaha soomaalidda Sameysanaya.
Sido kale waxaa uu mashquul ka jirayay goobaha lagu soo bandhigayay agabka hidaha iyo dhaqanka soomaalidda u gaar ah iyo dharka ay xertaan waxaana la arkayay haween ajnabi ah oo ku libsan Duruucda dumarka soomaalidda,islamarkaana si weyn ula dhacsan.
Waaa markii u horeysay oo bandhig ceynkaan ah oo lagu qabto magaalada Cape Town oo ay ka qeyb galaan soomaalidda ku nool magaaladaasi, iyadoo si weyna ay u soo dhaweeyeen.